Huawei S6700 Series Anoshandura Manufacturers | China Huawei S6700 Series Inoshandura Fekitori & Vatengesi
Iyo S6700 akateedzana switch (S6700s) anotevera-chizvarwa 10G bhokisi switch. Iyo S6700 inogona kushanda seye switch yekuwana muInternet data Center (IDC) kana switch yepamberi pamambure kambasi.
Iyo S6700 ine indasitiri-inotungamira mashandiro uye inopa inosvika makumi maviri nemana kana makumi mana nesere-mutsara-kumhanya 10GE madoko. Inogona kushandiswa mu data centre kupa 10 Gbit / s kupinda kumaseva kana basa seyakagadziriswa switch pane kambasi network kupa 10 Gbit / s traffic aggregation. Uye zvakare, iyo S6700 inopa akasiyana siyana masevhisi, akazara ekuchengetedza marongero, uye akasiyana QoS maficha kubatsira vatengi kuvaka scalable, inokwanisika, yakavimbika, uye yakachengeteka data nzvimbo. Iyo S6700 inowanikwa mumhando mbiri: S6700-48-EI uye S6700-24-EI.
S6720-EI Series Haizoshandisi
Maindasitiri-anotungamira, epamusoro-mashandiro eHuawei S6720-EI akateedzana akachinjika switch anopa yakakura masevhisi, akazara ekuchengetedza chengetedzo marongero, uye akasiyana QoS maficha. Iyo S6720-EI inogona kushandiswa kune server kuwana munzvimbo dzemadatha kana sekushanduka kwepakati kwemakampasi network.
S6720-HI Series Haizoshandisi
S6720-HI akateedzana akazara-akaonesa 10 GE nzira yekushandura maHuawei ekutanga IDN-akagadzirira akachinjika maficha anopa 10 GE downlink zviteshi uye 40 GE / 100 GE uplink zviteshi.
S6720-HI akateedzana switch anopa echinyakare AC kugona uye anogona kubata 1K APs. Ivo vanopa yemahara yekufambisa basa kuti ive nechokwadi chinowirirana mushandisi chiitiko uye vari VXLAN inokwanisa kuitisa network kuona. S6720-HI akateedzana switch dzinopawo yakavakirwa-mukati chengetedzo ma probes uye inotsigira zvisina kujairika traffic kuona, Encrypted Communications Analytics (ECA), uye network-wide kutyisidzira kunyengera. Iyo S6720-HI yakanakira emabhizimusi macampus, vatakuri, epamusoro dzidzo masangano, uye hurumende.
S6720-LI Series Haizoshandisi
Huawei S6720-LI akateedzana anotevera-chizvarwa akareruka ese-10 GE akagadziriswa akachinja uye anogona kushandiswa kwe10 GE kuwana pane kambasi uye data centre network.
S6720-SI Series Multi GE haizoshandisi
Huawei S6720-SI akateedzana anotevera-chizvarwa Multi GE akachinjika haizoshandisi akakodzera kumhanya-isina waya waya kuwana, 10 GE data centre server kuwana, uye kambasi network kuwana / kuunganidzwa.
Huawei CloudEngine S6730-H Series 10 GE haizoshandisi
CloudEngine S6730-H Series 10 GE Shanduko dzinounza 10 GE downlink uye 100 GE uplink kuunganidzwa kwemabhizimusi macampus, vatakuri, masangano epamusoro edzidzo, uye hurumende, kubatanidza native Wireless Local Area Network (WLAN) Access Controller (AC) kugona, kutsigira kusvika 1024 WLAN Access Points (APs).
Iwo akateedzana anogonesa kutendeuka kweaya wired uye isina waya netiweki - zvakanyanya kurerutsa mashandiro - kupa kwemahara kufamba kuendesa zvinoenderana mushandisi ruzivo uye Virtual Yakawedzera Yemunharaunda Nzvimbo Network (VXLAN) -based virtualization, ichigadzira yakawanda-chinangwa network. Iine yakavakirwa-mukati chengetedzo probes, CloudEngine S6730-H inotsigira zvisina kujairika traffic kuona, Encrypted Communications Analytics (ECA), uye network-wide kutyisidzira kunyengera.
Huawei CloudEngine S6730-S Series 10GE Haizoshandisi
Kupa 10 GE downlink zviteshi pamwe ne40 GE uplink zviteshi, Huawei CloudEngine S6730-S akateedzana masheche anounza yakakwira-kumhanya, 10 Gbit / s kupinda kune yakakwira-density maseva. CloudEngine S6730-S inoshandawo sepakati kana yekubatanidza switch pane kambasi network, ichipa chiyero che40 Gbit / s.
Iine Virtual Extensible Local Area Network (VXLAN) -based virtualization, yakazara chengetedzo marongero, uye huwandu hweMhando dzeSevhisi (QoS) maficha, CloudEngine S6730-S inobatsira mabhizinesi kuvaka scalable, yakavimbika, uye yakachengeteka kambasi uye data centre network.
Xfp Transceiver, Sfp C ++, Huawei Qsfp +, Huawei Olt Mutengo, Optical Fiber Module, External Modulation Transmitter,